Kickstarting Your Video Marketing Campaign na Videozọ 3 | Martech Zone
O nwere ike ịbụ na ị nụla na osisi vaịn na vidiyo bụ ezigbo ego maka azụmaahịa ọ bụla na-achọ imeziwanye ọnụnọ ha n'ịntanetị. Obere vidiyo ndị a dị mma na mmụba ọnụego na-aba ụba n'ihi na ha dị mma na itinye ndị na-ege ntị ma na-eziga ozi dị mgbagwoju anya n'ụzọ dị mma - gịnị agaghị ahụ n'anya?
Yabụ, ị na - eche etu ị ga - esi bido mgbasa ozi ahịa vidiyo gị? Mgbasa ozi vidio nwere ike iyi nnukwu ọrụ ma ị maghị ihe mbụ ị ga-eme. Adala mba, anyị ga-enye gị ndụmọdụ ole na ole iji nyere gị aka.
1. Chọpụta ndị na-ege gị ntị
Tupu ịmalite ịchọta ngwa iji mepụta vidiyo gị, ị ga-achọpụta onye ndị na-ege gị ntị bụ ndị mbụ. Ọ bụrụ na ịmaghị onye ịchọrọ ka vidiyo ahụ rute, ọ ga-esiri ike ịmepụta ọdịnaya na ka njọ, ọ nwere ike ịkwụsị ịnakọta ájá ebe ọ bụ na ọ dịghị onye chọrọ ile ya.
Ọ dị mkpa ịmata ndị na-ege gị ntị bụ n'ihi na ha ga-abụ ndị na-ele vidio gị. Yabụ, mata ha nke ọma - ihe masịrị ha, ihe ha achọghị, ihe ha na ya na-alụ, na otu ị ga - esi weta azịza maka nsogbu ha.
Ikekwe ha na-alụ ọgụ maka otu esi eji ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị, yabụ ịmepụta vidiyo nke na-akọwara ha gbasara ngwaahịa gị ma ọ bụ akara gị ga-abụ ụzọ dị mma iji bido.
2. Mee ụfọdụ nnyocha isiokwu
Keywords abụghị naanị maka ogo na Google. Ha nwere ike ịba uru dị ka ijide n'aka na vidiyo gị na-elele anya dịka ha dị maka ogo elu na injin ọchụchọ. Mgbe itinyere na nyocha mmanya na Youtube, ị ga-ahụ igbe ndọpụta jupụtara na ntụnye.
Aro ndị a bara uru maka vidiyo gị n'ihi na ọ na-egosi gị ihe ọchụchọ ndị a ma ama. Ozugbo inwee echiche banyere isi okwu ndị mmadụ na - achọ, ị ga - ewuli ọdịnaya gị gburugburu okwu ndị ahụ ma mepụta ihe ndị mmadụ chọrọ ịhụ.
Nwere ike ibuli SEO na vidiyo gị site na iji thumbnails, isiokwu, na nkọwa na-adọrọ mmasị nke ndị na-ege gị ntị na-achọ. Nanị jiri isiokwu ahụ dị ka i nwere ike na igbe nkọwa ma ọ bụ aha.
3. Nweta Enyemaka Site na Ngwaọrụ ụfọdụ
Ntaneti juputara na otutu ihe. Maka nsogbu ọ bụla, enwere ike ị ga - achọta azịza ya na Google.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ịmepụta vidiyo mana ịmaghị otu, ekwela ka nke ahụ gbochie gị ịmalite. Vidio nwere ike iyi ka ọ bụ nnukwu ego ma nwee ike iyi ihe ga - eme, ma kwenye ma ọ bụ na ịgaghị, ị nwere ike ịchọta ngwaọrụ maka imepụta vidiyo nke nwere ọnụ ọnụ ma ọ bụ ọbụlagodi n'efu.
Ikwesighi ibu onye ahia ahia vidiyo ka imeputa vidiyo n'onwe gi. Ọbụlagodi na ị na-amalite, ịnwere ike ịnweta ọtụtụ ngwaọrụ n'ịntanetị.
Ugbu a na ị nwere echiche siri ike banyere ihe ị ga-akwadebe iji mechaa kpoo mgbasa ozi vidiyo gị taa. Yabụ, bido depụta mkpụrụ okwu ndị ahụ ma chọpụta onye ndị na-ege gị ntị bụ. Ozugbo inwetara mmadụ abụọ ahụ, oge eruola ịmalite ịmepụta vidiyo gị.
Tags: Vidio Ahịavideo atụmatụ